ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း vkworld S8, Galaxy S8 ၏အံ့အားသင့်ဖွယ်စွမ်းဆောင်ချက်များနှင့်အတူ | Androidsis
Rafa Rodriguez Ballesteros | | မိုဘိုင်း, reviews
ယခုတကြိမ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဥရောပဈေးကွက်တွင်ခြေကုပ်ယူရန်ရည်ရွယ်ထားသောလူသိနည်းသောတရုတ်ကုမ္ပဏီမှစက်ပစ္စည်းတစ်ခုယူဆောင်လာသည်။ Vkworld ကသူ့ရဲ့စမတ်ဖုန်းအသစ်ကိုပြသလိုက်တယ်။ အဆိုပါ vkworld S8။ ဆမ်ဆောင်း၏နောက်ဆုံးပေါ်ဖုန်း၏ထိပ်ဆုံးတွင်နာမည်တစ်ခုပေးသောကိရိယာအသစ်။
တိုက်ဆိုင်မှုမရှိသော nomenclature S8 ။ ၎င်းသည်၎င်း၏နောက်ဆုံးပေါ်မော်ဒယ်၏နာမည်ကို Samsung နှင့်မျှဝေရုံမျှမကပါ။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်စက်၏နောက်ဖက်ကိုကြည့်လျှင်၎င်းသည်၎င်း၏ဒြပ်စင်များ၏တည်နေရာအတိအကျအတူတူဖြစ်သည်ကိုတွေ့ရသည်။ ထို့ကြောင့်သူတို့သည်လည်းရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတူညီကြသည်။
1 vkworld S8, Samsung S8 ၏အခြားကိုယ်ပွားရုံမျှသာမဟုတ်ပါ
2 vkworld S8 box ထဲမှာဘာလဲ
3 vkworld S8 ၏ဒီဇိုင်း
3.1 တိုက်တေနီယမ်နှင့်ဖန်ထည်များ၊ vkworls S8 အတွက်မြင့်မြတ်သောပစ္စည်းများ
4 ကြီးမားတဲ့ ၅.၉၉ လက်မမျက်နှာပြင်
5 ကျနော်တို့ vkworld S8 အတွင်းပိုင်းကိုကြည့်
6 Vkworld S8 အချက်အလက်စာရင်း
7 vkworld S8 ၏ကင်မရာများ
9 Wkworld S8 ကအသံထွက်တယ်
10.1 မျက်နှာ detector: တိုးတက်မှုလိုအပ်ပါတယ်
11 vkworld S8 တွင်အကောင်းဆုံးနှင့်အကောင်းဆုံး
vkworld S8, Samsung S8 ၏အခြားကိုယ်ပွားရုံမျှသာမဟုတ်ပါ
တစ်ခါတစ်ရံကမ္ဘာ့အဆင့်မီထိပ်တန်းတစ်ခု၏နာမည်နှင့်ပုံစံနံပါတ်ကိုအသုံးပြုခြင်း၏နည်းဗျူဟာသည်တစ်ခါတစ်ရံတွင်အလုပ်လုပ်သည်။ ဈေးနှုန်းအရမူရင်းဗားရှင်းကိုလက်မခံနိုင်သူများ၏အာရုံကိုဆွဲဆောင်နိုင်သည်။ ထိုသူတို့ကတူသောတစ်ခုဝယ်ယူနိုင်မှကောင်းသောမြင်လိမ့်မယ်။ သို့သော်များသောအားဖြင့်ကိရိယာတစ်ခုအားအစွမ်းထက်ဆုံးသောလက်မှတ်၏အရေးအကြီးဆုံးဟုခေါ်ဆိုခြင်းသည်ဆိုးကျိုးများဖြစ်နိုင်သည်။ အကြောင်းမှာ၎င်းသည်တစ်ခုနှင့်တစ်ခုအကြားနှိုင်းယှဉ်မှုကို ဦး တည်စေသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
အဆိုပါအမှန်တရားဖြစ်ပါတယ် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရ vkworld S8 သည် Samsung S8 နှင့်ဆင်တူသည်။ ကျနော်တို့ကသူတို့ကိုအကြားနှိုင်းယှဉ်သို့မဝင်ပါလိမ့်မယ်ပေမယ့်။ vkworld ကဒီကိရိယာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုဘာတွေကမ်းလှမ်းပေးသလဲဆိုတာကိုတစ်ချက်ချင်းစီကိုရှင်းပစ်လိုက်မယ်။
အများဆုံးဒီကဗျာရှုထောင့်အဖြစ်, wkworld S8 မှာကြီးမားတဲ့မျက်နှာပြင်အရွယ်အစားဟာအံ့။ ဖွယ်ရာပါ။ ၆ လက်မနှင့်အလွန်နီးကပ်ပြီးကြီးမားသော screen ကိုပေးသော panel တစ်ခု ၅.၉၉ လက်မ Full HD ဖြစ်ပြီး LG မှ Corning Gorilla Glass protection ဖြင့်ကာကွယ်သည်။ မီးမောင်းထိုးပြမည့်ရှုထောင့်အနေဖြင့်ထည့်သွင်းထားသောမျက်နှာပြင်သည်ရက်ရောသည် 5.500 mAh ဘက်ထရီ နောက်လာမည့်စကားပြောပါလိမ့်မယ်။
vkworld S8 box ထဲမှာဘာလဲ
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤစမတ်ဖုန်း၏သေတ္တာကိုဖွင့်လိုက်သည်နှင့်ပုံမှန်အတိုင်းပင်ရှေ့စာမျက်နှာတွင်စက်ပစ္စည်းကိုယ်နှိုက်ကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရှိရသည်။ စောစီးစွာဖမ်းခြင်းအားဖြင့် ကျနော်တို့တစ် ဦး စဉ်းစားဆင်ခြင်စရာအလေးချိန်သတိထားမိ။ အခြားအနီးအနားရှိဖုန်းတစ်လုံးနှင့်နှိုင်းယှဉ်နိုင်သည့်အခါ ပို၍ ပင်အလေးချိန်သောအလေးချိန်ရှိသည်။ က 5.500 mAh ဘက်ထရီသည်တာဝန်ရှိသည်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ကကမ်းလှမ်းကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ပိုလျှံအလေးချိန်အားဖြင့်လျော်ကြေးငွေဖြစ်ပါတယ်။
ကျနော်တို့ကရှားပါးဆက်စပ်ပစ္စည်းရှာတွေ့, ဤဖုန်းရှိအသစ်တစ်ခုကြောင့်ဖြစ်သည်။ vkworld S8 သည် USB Type-C အတွက်ရွေးချယ်သည်ပိုမိုခေတ်မီပြီးပိုမိုထိရောက်သည်ဟုဆိုရလျှင်ယခုတိုင်အသုံးများသည့် micro USB ထက်ပိုသည်။ အဆိုပါဆက်စပ်ပစ္စည်းထက်အခြားအဘယ်သူမျှမဖြစ်ပါတယ် USB Type-C connector adapter သို့“ Mini Jack” ဟုခေါ်သည် ကျွန်တော်တို့ရဲ့နားကြပ်ချိတ်ဆက်ရန်လိုအပ်သော။ ဟုတ်ပါတယ်၊ wkworld မှာနားကြပ်ဂျက်တန်းတူမပါဘဲလုပ်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။
ငါတို့မှာလည်းရှိတယ် ဒေတာဆက်သွယ်မှုနှင့်အားသွင်းဘို့ USB cable ကို ဘက်ထရီ။ ပြီးနောက် Wall plug ကို လျှပ်စစ်စီးကြောင်းကချိတ်ဆက်ရန်။ နောက်တခါပြောရမယ် မရှိခြင်း စမတ်ဖုန်း၏ box ထဲမှာ။ ထုတ်လုပ်သူများမေ့လျော့နေပုံရသည် နားကြပ်။ အချို့သော USB type C output ကိုထည့်သွင်းရန်အသေးစိတ်ဖြစ်လိမ့်မည်။
ကျနော်တို့ box ထဲမှာအထဲမှာရှာတွေ့မှကျေးဇူးတင်ဖြစ်သင့်ပေမယ့် ဆီလီကွန်အိမ်မှ ဒါကကျွန်တော်တို့ရဲ့စမတ်ဖုန်းအသစ်ကိုတစ်မိနစ်ကနေကာကွယ်ပေးမှာပါ။ ပြီးတော့က မျက်နှာပြင်အကာ။ နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကိုထုံးတစ်လုံး (ဆီလီကွန်အိတ်) နှင့်သဲတစ်ကောင် (နားကြပ်များမရှိခြင်း) ကိုပေးသည်။ ကျနော်တို့မျှော်လင့်ချက်မဆုံးရှုံးကြဘူး။ ဤနှုန်းထားဖြင့်ဖုန်းတစ်လုံးသည်နားကြပ်ကိုထည့်သွင်းထားခြင်းကြောင့်၎င်းသည်၎င်း၏ပြိုင်ဘက်များထက်အားသာချက်တစ်ခုသို့မဟုတ်အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေနိုင်သည်။
vkworld S8 ၏ဒီဇိုင်း
ကျွန်တော်မှတ်ချက်ချသည်မှာ vkworld S8 သည် Samsung ၏ namesake နှင့်အလွန်ဆင်တူသည်။ အချို့သောတစ်ခုလုံးကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံနှင့်ကွဲပြားခြားနားမှုနှင့်အတူပေမယ့်။ ဥပမာအားဖြင့်, သင့်ရဲ့နောက်ဘက်မှာသင်၏ပစ္စည်းတည်နေရာအတူတူပင်ဖြစ်ပါသည်။ ဘယ်ဘက်မှညာသို့နှစ်ဆ LED flash၊ ကင်မရာနှင့် fingerprint reader တို့ကိုတွေ့ရသည်။ ဒါပေမယ့် ထူးခြားချက်တစ်ခုက wkworld S8 မှာကင်မရာနှစ်လုံးပါရှိပါတယ်, Samsung က၎င်း၏ထုတ်ကုန်များမပါသေးသောနှင့်အတူအရာတစ်ခုခု။
ကျနော်တို့ပြီးသားကြောင်းအခါသမယအပေါ်မှတ်ချက်ချကြပြီ လက်ဗွေဖတ်စက်၏နောက်ဘက်တည်နေရာခန္ဓာဗေဒအဆင့်တွင်၎င်းသည်၎င်း၏ရှေ့ပိုင်းတွင်ထက်ပိုမိုသက်တောင့်သက်သာရှိသည်။ ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ကိုလည်းထောက်ပြ ညာဘက်ဘေးကကင်မရာဘေးကအကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုမဟုတ်ပါ။ ကောင်းပြီ, ကင်မရာမှန်ဘီလူးအစဉ်အမြဲမှန်ဘီလူးtoရိယာမြူသို့မဟုတ်ညစ်ပတ်စေနိုင်သည်ကို "လက်ဗွေရာ" ကိုဘာသာရပ်ဖြစ်ပါတယ်။
၎င်း၏အစိတ်အပိုင်းများအားဖြင့်တင်ပြသဟဇာတကောင်းလှ၏။ Align လုပ်ထားသောသုံးခုသည်အလွန်တင့်တယ်လှပပြီးမည်သည့်အရာမှမပါ ၀ င်ပါ။ သို့သော်ရွေးချယ်မှုအရလက်ဗွေဖတ်စက်သည်ကင်မရာထက်အနည်းငယ်နိမ့်သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့ပိုမိုနှစ်သက်ကြသည်။ ကရူပကအောင်မြင်မှုကြောင်းအသိအမှတ်ပြုရမည်ဖြစ်သည်ပေမယ့်။
ယင်းကြောင့် ဆောက်လုပ်ရေးအတွက်အသုံးပြုပစ္စည်းများvkworld ဟာကောင်းမွန်တဲ့အလုပ်တစ်ခုလုပ်ခဲ့တယ်။ ပထမတစ်ချက်မှာအရောင်တောက်တောက်ရှိသောပလတ်စတစ်ပစ္စည်းနှင့်တူသည်။ အကြောင်းပါ အထိ 40 ကွဲပြားခြားနားသောလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အတူကုသဖန် လိုချင်သော finish ကိုရရှိသောသည်အထိကွဲပြားခြားနားသော tools တွေကိုအသုံးပြုခဲ့ကြသည်။
တိုက်တေနီယမ်နှင့်ဖန်ထည်များ၊ vkworls S8 အတွက်မြင့်မြတ်သောပစ္စည်းများ
ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ကနှင့်အတူ၎င်း၏ကျောအပေါ်ရှိသည် သတ္တုပြားတည်ရှိရာအောက်မှာစနစ်ဖြစ်ပြီးဖန် ပို။ ပင်ကြာရှည်ခံ finish ကိုအဘို့။ Vkworld ကဖန်သားချည်ထားသည့်တိုင်နောက်ဖုံးသည်စမတ်ဖုန်းအများစုထက်ပြန်တက်ခြင်းနှင့်ခြစ်ခြင်းများကိုခံနိုင်ရည်ရှိစေသည်။ တကယ်ပဲ အပြီးသတ်ကောင်းမွန်သည်နှင့်အလွန်ကြော့ကြည့်ရှုသည်.
၎င်း၏နောက်ဘက်အစိတ်အပိုင်း၏ကွေးအဆုံးချောမွေ့စွာထည့်သွင်း တိုက်တေနီယမ်နှင့်ပြုလုပ်ထားသည့် unibody frame တစ်ခုဖြစ်သည်။ နောက်ကျောရှိဖန်များကုသမှုနှင့်အတူဤပစ္စည်းကိုအသုံးပြုခြင်းသည်ရလဒ်တစ်ခုဖြစ်သည် ကြမ်းတမ်းပြီးသီးသန့်ထုတ်ကုန်။ ကျွန်ုပ်တို့မလွှဲမရှောင်သာမြေကြီးပေါ်ကျရောက်သည့်အချိန်ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားသည့်အရေးကြီးသောကဏ္ aspect တစ်ခု။ အဲဒါကငါတို့လက်ကိုခန္ဓာဗေဒနဲ့အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်စေတယ်။
၎င်း၏ရှေ့မှောက်၌ငါတို့ရှာပါ စျေးကွက်ထဲရှိအကြီးဆုံးမျက်နှာပြင်တစ်ခုဖြစ်သည် ဒီအရွယ်အစား၏စမတ်ဖုန်းပေါ်မှာ။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရွယ်အစားမှာ ၅ လက်မမျက်နှာပြင်ပါသည့်စမတ်ဖုန်းတစ်ခုနှင့်တူသည်။ ထိုအကကျေးဇူးတင်ပါတယ်အောင်မြင်သည် ၉၁% သောရှေ့မျက်နှာပြင်နေရာချထားမှုဖြင့်ရှေ့မျက်နှာပြင်ကိုအများဆုံးပြုလုပ်သည်.
၎င်းသည်ကျွန်ုပ်၏အမြင်တွင်ထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်သည့်အရာတစ်ခုခုကိုတွေ့မြင်ခဲ့ရသည် "snag"။ ဒါဟာဖြစ်ပါသည် ရှေ့ကင်မရာ၏တည်နေရာ။ ယေဘုယျစည်းမျဉ်းအရ၎င်းသည်အာရုံခံကိရိယာ၏တစ်ဖက်တစ်ချက်နှင့်ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများအတွက်စပီကာများပေါ်တွင်တည်ရှိသည်။ ဒီကိစ္စမှာ wkworld သည်ညာဘက်အောက်ဘက်ရှိကင်မရာကိုနေရာချခြင်း.
ကမ္ဘာ့လူ ဦး ရေ၏ ၁၅% သာလက်ဝဲလက်ကျန်ရှိသူများဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့အများစုသည်စမတ်ဖုန်းအသုံးပြုသူများသည်ဖုန်းကိုကိုင်ထားရန်လက်ျာလက်ကိုအသုံးပြုသည်။ ယေဘူယျစည်းမျဉ်းအရဆိုရင် လက်ကိုင်ဖုန်းကိုသုံးတဲ့အချိန်မှာငါတို့လက်ရဲ့အနေအထားက ဒါမှမဟုတ်လျှောက်လွှာတွေကိုသုံးတယ် ကင်မရာဖုံးလွှမ်းရာရိယာ.
selfie ကင်မရာကိုဖွင့်သောအခါသဘာဝအမူအယာသည်ဖုန်း၏ထိပ်ကိုကြည့်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဒီလိုလုပ်ခြင်းအားဖြင့်ငါတို့ဟာမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုမိုးကုပ်စက်ဝိုင်းကိုကြည့်နေသလိုမြင်ရသည်။ Y အောက်ခြေကနေမျက်နှာဖို့ချဉ်းကပ်မှုအမြဲအများဆုံးချော့မော့မဟုတ်ပါဘူး။ လူတစ် ဦး သည်ယင်းကိုအသုံးမပြုမီအထိလက်ချောင်းတစ်ချောင်းမကပ်ဘဲဓာတ်ပုံရိုက်ယူရန်နည်းလမ်းတစ်ခုရှာရန်အလွန်ခက်ခဲသည်။
မျက်နှာအသိအမှတ်ပြုသော့ဖွင့်ခြင်းကိုအသုံးပြုရန်တောင်မှကျွန်ုပ်တို့နောက်မှပြောမည်မှာမိုဘိုင်းဖုန်းကိုကြည့်ခြင်းသည်သဘာဝမဟုတ်ပါ။ သောကြောင့် ကျနော်တို့ရှေ့ panel ရဲ့အောက်ခြေမှာကင်မရာကို install လုပ်ဖို့ကအမှားတစ်ခုစဉ်းစားပါ ကိရိယာ၏။
ယင်း၏အတွက် ညာဘက် သော့ခတ်၊ သော့ဖွင့်ရန်နှင့်ပိတ်ရန်ခလုတ်ကိုသာကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရသည်။
el en ဘယ်ဘက် ကျနော်တို့တစ်ခုတည်း elongated button ကိုအတွက်အသံအတိုးအကျယ်ထိန်းချုပ်မှုရှိသည်။
ကျနော်တို့ကုမ္ပဏီအမြဲတမ်း silicone အမှုအဖြစ် "အသေးစိတ်" အချို့ကမ်းလှမ်းသောအခါ, တန်ဖိုးထားကြောင်းအမြဲမှတ်ချက်ချ vkworld S8 နှင့်အတူတွဲဖက်ထားသည့်အရည်အသွေးသည်အရည်အသွေးကောင်းမွန်ပြီး၎င်းသည်ကိရိယာအားလက်အိတ်ကဲ့သို့ကိုက်ညီစေသည်။ ဒါပေမယ့် အပေါ် silicone အမှုနှင့်အတူခလုတ်ကိုနှိပ်တဲ့အခါမှာအချို့သောအခက်အခဲလေ့လာသည်။ အထူးသဖြင့်, သော့ခတ်ခလုတ်သည်သင်နှင့်သက်ဆိုင်သည့်အဖုံးနှင့်အတူ၎င်းကိုသက်ဝင်စေရန်မျှော်မှန်းထားသည်ထက် ပို၍ ခက်ခဲသောဖိအားပေးရန်လိုသည်။
ထဲမှာ အောက်ခြေ ဖုန်းထဲကမိုက်ကရိုဖုန်းကိုတွေ့တယ် connector ကိုအားသွင်း၏ဤအမှု၌ USB Type-C, အ စပီကာ။ ကျနော်တို့သတိထားမိ အရေးကြီးသောမရှိခြင်း၊ mini jack connector။ Wkworld S8 ဟာ quintessential headphone jack ကိုမသွားဘူး။ ကြိုတင်အစားထိုးခြင်းထက်များစွာသောခြေလှမ်းတစ်ခုကစဉ်းစားသောအရာတစ်ခုခု ..
ကြီးမားတဲ့ ၅.၉၉ လက်မမျက်နှာပြင်
smarpthone အသစ်တစ်ခုစီနှင့်တွေ့သည်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရသည်5လက်မကျိန်းသေမေ့လျော့ခဲ့သည်။ ၅.၅ လက်မဖန်သားပြင်များပင်တဖြည်းဖြည်းသေးငယ်လာသည်။ ဖန်သားပြင်၏အရွယ်အစားသည်ဆက်လက်တိုးပွားနေပြီး၎င်းသည်ဤအချက်ကိုသက်သေပြနိုင်သည်။ အဆိုပါ wkworld S5,5 စီး 5,99 လက်မမျက်နှာပြင် ၅ လက်မမျက်နှာပြင်ပါသောမည်သည့်မိုဘိုင်းဖုန်းထက်မဆိုပိုမိုကြီးမားသည့်ကိုယ်ထည်တွင်ကောင်းမွန်စွာတပ်ဆင်ထားသည်။
ငါတို့မှာမျက်နှာပြင်ရှိတယ် ၁၈: ၉ Full HD format။ အဲဒါရှိတယ် ၄ မျိုးဆက် Corning Gorilla Glass ကာကွယ်မှု။ ပြီးတော့ resolution 2160 x 1080 ဒါကကျွန်တော်တို့ကိုမျက်နှာပြင်ကပေးတဲ့အရည်အသွေးကိုအမြင့်ဆုံးခံစားစေပါလိမ့်မယ် LG ကပြုလုပ်သည်.
vkworld S8 သည်စီးရီး (သို့) ရုပ်ရှင်များစားသုံးရန်ကျွန်ုပ်တို့၏စမတ်ဖုန်းများကိုပိုမိုအသုံးပြုသည်ဟူသောသီအိုရီကိုအတည်ပြုသည်။ ဤအကြောင်းကြောင့်၊ သုံးစွဲသူများအကြားမြင့်မားသော resolution နှင့်ကောင်းမွန်သောအရွယ်အစားမျက်နှာပြင်ကိုပိုမိုတန်ဖိုးထားလာသည်။ အချို့အတွက်တစ်ခုသို့မဟုတ်အခြား terminal တစ်ခုအတွက်ရွေးချယ်ရန်ဖြစ်နိုင်သည်။
အဆိုပါ vkworld S8 display ကိုတစ် ဦး ပါရှိပါတယ် 178 ဒီဂရီအထိထောင့်ကြည့်ရှု။ ပြီးတော့သိပ်သည်းဆတစ်ခု တစ်လက်မလျှင် ၃၀၀ pixels ရှိသည်။ ထို့အပြင်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားထုတ်လုပ်သူအနည်းငယ်မှအလင်းရောင်နှင့်တောက်ပမှုအဆင့်ကိုဖော်ပြရန်ရွေးချယ်ထားသည့်အချက်အလက်များကိုပေးသည်။ အဆိုပါ vkworld S8 ရောက်ရှိ တောက်ပ၏ 550 nits။ ဆိုလိုသည်မှာကျွန်ုပ်တို့သည်မိုဘိုင်းဖုန်းကိုအိမ်ပြင်တွင်အလင်းရောင်ကြီးစွာဖြင့်ဖတ်ရှုခြင်းသို့မဟုတ်အသုံးပြုခြင်းတွင်ပြproblemsနာမရှိနိုင်ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့မြင်တွေ့ရသည့်အတိုင်းအရည်အသွေး၊ resolution နှင့်အရွယ်အစားအရအလွန်ကောင်းသောမျက်နှာပြင်ရှိသည်။ ပြင်းထန်သောလူလတ်တန်းစားစမတ်ဖုန်းဈေးကွက်တွင်ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ရန်အချက်အလက်များမြင့်တက်လာသည်။ ဘယ်တစ်ခု အထိ 91% ၏ရှေ့ panel ကိုထေိုအချိုး အများပြည်သူအကြားအများကြီးလိုပဲ။
ကျနော်တို့ vkworld S8 အတွင်းပိုင်းကိုကြည့်
ဒီစမတ်ဖုန်းကစွမ်းအားအရကျွန်ုပ်တို့ကိုဘာတွေကမ်းလှမ်းတယ်ဆိုတာကိုကြည့်ဖို့အချိန်ရောက်လာပြီ။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ထိုကဲ့သို့သောဒေတာများကိုထုတ်ကုန်များတွင်အသုံးပြုခြင်းသည်အရာရီယို၏ထိပ်ဆုံးနေရာမဟုတ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၇ ခုနှစ်၏နောက်ဆုံးလများတွင်ဖုန်းတစ်လုံးအတွက် RAM 2017 GB သည်ရှားပါးပုံရကြောင်းကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်ခဲ့ရသည်။ နှင့်အများဆုံးထုတ်လုပ်သူများကဲ့သို့, ထိုမှတ်ဉာဏ်ကိုချဲ့ထွင်ရန်ရွေးချယ်ခဲ့သည်။
အထူးသဖြင့် vkworld S8 သည်၎င်းကိုကူးယူရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့က4GB RAM မှတ်ဉာဏ်။ အတူတူက သိုလှောင်မှုအတွက် 64GB ROM ကို သူတို့ကစံပြစုံတွဲတစ်တွဲပါစေ။ စမတ်ဖုန်းတစ်လုံး၏ဈေးနှုန်းအနိမ့်အမြင့်တွင်ရှိသည့်စမတ်ဖုန်းတွင်မစဉ်းစားမဆင်ခြင်နိုင်သောကိန်းဂဏန်းများက high-end သည်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်ကုန်ကျမည့်အရာဖြစ်သည်။
အရာအားလုံးအဆင်ပြေစွာအလုပ်လုပ်နိုင်ရန် vkworld S8 သည်ယုံကြည်စိတ်ချရမှုထက်ပိုမိုသောပရိုဆက်ဆာအောက်တွင်အလုပ်လုပ်သည်။ The MediaTek 6750Huawei, LG, Meizu သို့မဟုတ် Doogee စသည့်ကုမ္ပဏီများသည်အခြားသူများအကြားယုံကြည်မှု ဆက်၍ ပေးနေသည်။ စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုအလွန်အကျွံမရှိဘဲဖုန်း၏အစိတ်အပိုင်းများအားလုံးသည်အမြင့်ဆုံးစွမ်းဆောင်နိုင်မှုကိုသေချာစေသည်။ ရလဒ်ကောင်းများကြောင့်မရေမတွက်နိုင်သောစမတ်ဖုန်းများ၌ရှိနေဆဲဖြစ်သော Octa-core ။
operating system အတွက်, သင်တန်း, ငါတို့၌ရှိသည် android ၏နောက်ဆုံးထွက်ဗားရှင်း။ ထို့အပြင်၎င်းသည်စိတ်ရှုပ်ထွေးစေသည့်အလွှာနှင့်အတူမလာသည်ကိုတွေ့ရ။ ၀ မ်းသာပါသည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့အား Android မှပေးထားသောချိန်ညှိချက်များနှင့်ထိန်းချုပ်မှုများအားလုံးရယူနိုင်သည်။ အောင်မြင်မှုတစ်ခုဖြစ်သော Android "pure" သည်ဖြတ်တောက်ခြင်းသို့မဟုတ်မလိုအပ်ဘဲအပူလွန်ကဲခြင်းတို့မှစစ်ဆင်ရေးများကိုရှောင်ရှားလိုပါကအကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။
ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ယခင်ကဖြစ်ကြသည် မည်သည့်အလုပ်ကိုမဆိုအံ့သြဖွယ်ကောင်းသောစမတ်ဖုန်းတစ်လုံး။ ဂိမ်းကစားဖို့ဂရပ်ဖစ်လိုအပ်တယ်။ ရုပ်ရှင်နှင့်စီးရီးပြန်ဖွင့် applications များ။ ပြီးတော့ GPS navigator ။ ရလဒ်အားလုံးစမ်းသပ်မှုများတွင်ကောင်းသောဖြစ်ခဲ့သည်။ Multitasking ပြုလုပ်ခြင်းသည်ပြaနာမဟုတ်ပါ။ ပစ္စည်းတစ်ခု ဖျော်ဖြေအားလုံးစမ်းသပ်မှုများတွင်ကျွမ်းကျင်စွာအလုပ်လုပ်တယ်နှင့် အပူချိန်မဆိုတိုးသတိထားမိစရာမလိုဘဲ.
ကျွန်ုပ်တို့မြင်တွေ့ရသည့်အတိုင်း high-end သည်ဘက်ထရီများကိုအရေးပေါ်ထားရမည်။ ကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရသောစက်ပစ္စည်းအသစ်တစ်ခုနှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့သည်စဉ်းစားထားသောအလယ်အလတ်တန်းစားသည်၎င်း၏ဒေါက်အပေါ်မည်သို့ ပို၍ နီးကပ်စွာတွေ့မြင်ရသနည်း။ “ ထိပ်” ဟုသတ်မှတ်သူများ၏စမတ်ဖုန်းကိုဝယ်ယူခြင်းသည်အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှအကျိုးအမြတ်နည်းပါးလာလိမ့်မည်။ ယခုအချိန်အတန်ကြာလျှင်ကျွန်ုပ်တို့သည်တစ်ခုနှင့်တစ်ခုအကြားရှာတွေ့နိုင်သောကွဲပြားခြားနားမှုများသည်နည်းပါးလာသည်။
Vkworld S8 အချက်အလက်စာရင်း
operating system အန်းဒရွိုက် 7.0
ဖန်သားပြင် ၅.၉၉ Corning Gorilla Glass LG - ၁၈: ၉ Full HD format
Processor ကို MediaTek 6750T 1.5 GHz Octa - Core
သိုလှောင်မှု 64 GB ကိုချဲ့ထွင်
ရှေ့ကင်မရာ 13 Mpx
နောက်ကင်မရာ Dual Camera 16 Mpx +5Mpx
ဘက်ထရီ 5.500 mAh - မြန်သောအားသွင်းနိုင်မှုကိုထောက်ပံ့သည်
အရွယ် 75.00 158.00 မီလီမီတာမီလီမီတာမီလီမီတာ x x 8.5
အလေးချိန် 247 ဂရမ်
စြေး 143.99 €
ဤနေရာတွင်အကောင်းဆုံးစျေးနှုန်းဖြင့် vkworld S8 ကိုဝယ်ပါ
vkworld S8 ၏ကင်မရာများ
ပရိုဆက်ဆာများကဲ့သို့ပင်အလယ်အလတ်တန်းစားစမတ်ဖုန်းထုတ်လုပ်သူများသည်၎င်းတို့၏ကင်မရာများကိုညှိယူရန်ပိုမိုကြိုးစားလာကြသည်။ လူမှုကွန်ယက်ကိုနှစ်သက်သူများအနေဖြင့်အရည်အချင်းပြည့်ဝသောကင်မရာရှိခြင်းသည်အားလုံးသို့မဟုတ်လုံးဝမဖြစ်နိုင်သည်ကိုသိခြင်း။ ကျနော်တို့ဘယ်လိုမြင်နေကြသည် လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်ကတရုတ်ဖုန်းကင်မရာများ၏ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းသောကျော်ကြားမှုသည်သမိုင်းတွင်ကျဆင်းခဲ့သည်.
El vkworld S8 တွင်အရည်အချင်းရှိသောကင်မရာနှစ်လုံးတပ်ဆင်ထားသည် နောက်ဘက် တပ်ဆင်ထား 16 Mpx နှင့်5Mpx Resolution ရှိသောမှန်ဘီလူးနှစ်ခု ပေါင်းစပ်အလွန်ကောင်းသောရလဒ်များကိုပူဇော်သက္ကာဘို့နိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်မြင့်မားသောအသေးစိတ်အချက်အလက်များဖြင့်ဓာတ်ပုံများကိုရရှိနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး၎င်းသည်သူတို့၏အသန့်ရှင်းဆုံးအခြေအနေတွင်ရှိသောအရောင်များကိုရောင်ပြန်ဟပ်နိုင်သည်။ ပြီးတော့အဖြူချိန်ခွင်လျှာမှာလည်းကောင်းမွန်တဲ့အဆင့်ကိုရရှိခဲ့တယ်။
ကင်မရာနှစ်လုံးကြောင့်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ကျနော်တို့နာမည်ကြီးပုံတူအကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့်အတူဓာတ်ပုံရိုက်ယူနိုင်ပါတယ်။ အကြောင်းအရာကိုရှေ့တန်းရှိမီးမောင်းထိုးပြခြင်းနှင့်အနုပညာနှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အသွင်အပြင်အတွက်နောက်ခံကိုညင်သာစွာမှုန်ဝါးစေခြင်း။ Y ကျွန်ုပ်တို့သည်အမျိုးမျိုးသောမြင်ကွင်းများမှရွေးချယ်နိုင်သည် အရာအတွက်အလိုအလျှောက်ကင်မရာ settings ကို။ ရှုခင်း၊ ပါတီ၊ ကမ်းခြေ၊ ရုပ်ရှင်ရုံ၊ နှင်းများနှင့်များစွာသောအရာများ။
ယင်း၏အတွက် ရှေ့အပိုင်း ငါတို့တစ်ခုတွေ့တယ် ဓာတ်ပုံကင်မရာ အရာ၏ resolution ကိုရှိပါတယ် 13 Mpx။ ကျွန်ုပ်တို့၏ selfies များသည်အဓိကကင်မရာနှင့်ရိုက်ထားသောဓာတ်ပုံများနှင့်အတူတူပင်အရည်အသွေးပြည့်မှီသည်။ ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့က re- လွှမ်းမိုးခြင်းကိုရှောင်ရှားနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး ဒါကြောင့်၏တည်နေရာမှားယွင်းမှုတစ်ခုဖြစ်သည် အမြောက်အများ။ လက်ကိုလက်ချောင်းတစ်ချောင်းသို့မဟုတ်လက်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုမပါဘဲဓာတ်ပုံရိုက်ရန်ဖုန်းကိုကျွန်ုပ်တို့ကိုင်ထားသည့်နေရာမှဖယ်ရှားခြင်းသည်သဘာဝမကျပါ။
ရှေ့ကင်မရာဖြင့်ဓာတ်ပုံရိုက်သောအခါမျက်နှာအလှတရားကိုရွေးချယ်နိုင်သည်။ သင့်မှာမကောင်းတဲ့အကြောင်းပြချက်မရှိတော့ဘူး။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့စွန့်ပစ်ခြင်းမှာ တိုးတက်စေရန်သက်ရောက်မှုတစ်ခုလုံး catalog (ဖြစ်နိုင်လျှင်) selfie ဓာတ်ပုံတစ်ပုံ။ အလှအပ၊ အရောင်တင်ခြင်း၊ ဆန့်ခြင်း၊ မည်သူခွဲစိတ်ဆရာဝန်လိုအပ်သနည်း။
ဓာတ်ပုံထဲမှာ zoom ကိုအများဆုံးအသုံးပြုခြင်းဖြင့်နောက်ဆုံးပုံသည် pixelated မဖြစ်ခြင်းကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရသည်။ ကျနော်တို့perfectlyုံဖမ်းယူ၏ဒြပ်စင်ခွဲခြားသတ်မှတ်။ သဘာဝအလင်းရောင်ကောင်းခြင်းဖြင့် optical zoom ၏ရလဒ်သည်လက်ခံနိုင်ဖွယ်ရှိသည်။
စကရင်ကြီးကြီးမားမားပါတဲ့စမတ်ဖုန်းကိုတွေ့ရင်သူရဲ့ဘက်ထရီကအလိုအလျောက်လုပ်ဆောင်ပေးတယ်။ ၆ လက်မနီးပါးအရွယ်ရှိမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်ကြာရှည်စွာအသုံးပြုခြင်းကြောင့်စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုသည်အလွန်မြင့်မားသည်။ ထို့ကြောင့်သမားရိုးကျဘက်ထရီတစ်ရက်လုံးလုံးအပြည့်အ ၀ ထောက်ပံ့ရန်ခက်ခဲသည်။ vkworld S6 သည်ဤအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားထားသည်။
၅၅၀၀ mAh ဘက်ထရီရှိတယ်။ အားသွင်းရန်လုံလောက်သောကြောင့်သင်တစ်ရက်လုံးအားသွင်းရန်စိုးရိမ်စရာမလိုပါ။ တကယ်တော့, ဖုန်းကိုဘယ်လိုသုံးသလဲဆိုတာအမြဲတမ်းမူတည်ပြီး၊ ၎င်းကိုချိတ်ဆက်စရာမလိုဘဲ ၂ ရက်ပြည့်မည် load ရန်။ ပိုက်ဆန်လျှော်ကြိုးနှင့်တစ်နေ့လုံးလမ်းလျှောက်နေသူများအတွက်အားရစရာတစ်ခု။
ပစ္စည်းတစ်ခုလုံးကိုကြာရှည်စွာအသုံးပြုခြင်းဖြင့်နောက်တစ်နေ့မွန်းလွဲပိုင်းအထိကျွန်ုပ်သည်၎င်းကိုအားသွင်းစရာမလိုဘဲအသုံးပြုနိုင်သည်။ အခြားနည်းလမ်းများနှင့်မမြင်နိုင်သောအရာသည်မျက်နှာပြင်နည်းသောတောင်မှပင်။ wkworld S8 ဘက်ထရီသည်ရေရှည်အသုံးပြုရန်အတွက်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည် ဒါကြောင့်တစ်နေ့တာမှာအားသွင်းစရာအကြောင်းလုံးဝမေ့နိုင်အောင်။
အပျက်သဘောဆောင်သောအပိုင်းအဖြစ်, ကြီးမားတဲ့ဘက်ထရီရှိခြင်းအနည်းဆုံးယခုအချိန်တွင်, တိုက်ရိုက်အချိုးကျသည် ဖုန်းကပိုကြီးတဲ့အလေးချိန်ရှိတယ်လို့။ အဘယျသို့လည်း ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ terminal ကို အထူအနည်းငယ်စင်တီမီတာရရှိ ဤအချက်နှင့် ပတ်သက်၍ ကွဲလွဲသောထင်မြင်ချက်နှစ်ခုရှိသည်။ တဖကျတှငျ, ကြာချိန်နှင့်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ကိုပိုနှစ်သက်သူတွေကို, အနိမ့်မကောင်းသောအအဖြစ်စက်၏ပိုကြီးတဲ့အလေးချိန်ယူဆသူများဖြစ်ကြသည်။
ဒါပေမယ့်အခြားတစ်ဖက်မှာဖုန်းတစ်လုံးမှာကိုယ်အလေးချိန်ကျတာဟာကြီးမားတဲ့ချို့ယွင်းချက်လို့သတ်မှတ်သူတွေရှိပါတယ်။ စမတ်ဖုန်းများ၏သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူမှုသည်၎င်း၏အဓိကအကြောင်းရင်းဖြစ်သည်။ ပုံမှန်အလေးချိန်နှစ်ဆရှိသောဖုန်းထဲသို့ ၀ င်ရောက်ခြင်းသည်မဖြစ်နိုင်ပါ။ သောကြောင့် ဖုန်းကိုနေ့စဉ်အားသွင်းရန်ပိုနှစ်သက်သောသူများရှိသည် အများကြီးပိုမိုပေါ့ပါးအလေးချိန်လဲလှယ်အတွက်။
ယေဘုယျစည်းမျဉ်းအရသုံးစွဲသူများအားလုံးသည်၎င်းတို့သည် RAM နှင့် ROM ပိုမိုလိုအပ်ကြောင်းသဘောတူကြသည်။ ပိုမိုမြင့်မားသောမျက်နှာပြင်နှင့်ကင်မရာ resolution ။ တောင်မှသာ။ ကြီးမြတ်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်။ သို့သော်အသုံးပြုသူအားလုံးကိုဤကိစ်စနှင့် ပတ်သက်၍ သဘောတူညီရန်ခက်ခဲသည်။ သူတို့ကကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ဆန့်ကျင်အလေးချိန်ရင်ဆိုင်နေရသည်။ Vkworld S8 သည်အခြားအရာအားလုံးထက်ဘက်ထရီပိုမိုရှာဖွေရန်စိတ်ကျေနပ်မှုရှိမည်မှာသေချာသည်။
Wkworld S8 ကအသံထွက်တယ်
အသံပိုင်းဆိုင်ရာကဏ္ mobile သည်မိုဘိုင်းဖုန်းပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းများတွင် ပို၍ အရေးကြီးလာသည်။ ပြီးတော့ဒါကငါတို့ဂရုမစိုက်တဲ့အရာလို့ပဲ။ ဆိုလိုသည်မှာ ကျနော်တို့အနည်းဆုံးအာရုံစူးစိုက်မှုကိုပေးသောအတွက်ရှုထောင့်တစ်ခု။ အကယ်၍ အကောင်းဆုံးဖုန်းသည်စပီကာအသံအနည်းငယ်သာရှိပါက၎င်းသည်စိုးရိမ်စရာမဟုတ်ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဂီတကိုနားထောင်ရန်သို့မဟုတ်ဗွီဒီယိုများကြည့်ရှုရန်ပြင်ပဆက်စပ်ပစ္စည်းများကိုတိုး။ အသုံးပြုသည်။ စျေးကွက်ရှိစမတ်ဖုန်းအားလုံးတွင်စပီကာတစ်ခုတည်းကိုတွေ့ရလေ့ရှိသည်။ ကျွန်တော်တို့ကြာမြင့်စွာကတည်းကလေ့လာတွေ့ရှိခဲ့တဲ့အတိုင်း \_ t အသံသည်အနည်းငယ်သို့မဟုတ်လုံးဝပြောင်းလဲခြင်းမရှိသောကဏ္ aspect တစ်ခုဖြစ်သည်.
Vkworld S8 ကအသံနဲ့ကြည့်ရင်နောက်ထပ်ဖုန်းတစ်လုံးပါ။ တကယ်တော့စမတ်ဖုန်းကိုဒေတာနဲ့အခြားဒေတာတွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်ဖို့အရမ်းခက်တယ်။ ပြီးတော့ဒါကငါတို့မှာဒေတာမရှိဘူး။ ထုတ်လုပ်သူများကအများအားဖြင့်သူတို့ရဲ့စပီကာများမှ watts power ကိုချန်လှပ်ကြသည်။ အသံချိန်ညှိချက်များအရ configuration level သည်သုညဖြစ်သည်။
ဤအခြေအနေမျိုးတွင်၊ အခြေအနေအမျိုးမျိုးတွင်စမ်းသပ်ပြီးသည်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့အတည်ပြုနိုင်သည် အများဆုံးအသံမှာအသံအတိုးအကျယ်အဆင့်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်နေဆဲပင်။ တေးဂီတကိုတီးမှုတ်သည့်အခါ၌၎င်းသည်မတောက်ပပါ။ ၎င်းသည်ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်သည်။ အမြဲတမ်း improvable ပေမယ့်မျှော်လင့်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီ။
ယခုသယ်ဆောင်ရလွယ်သောစပီကာများကိုအလွန်အသုံးများပြီးသေးငယ်သည့်တိုင်ကြီးမားသောစွမ်းအားနှင့်အသံအရည်အသွေးကိုပေးနိုင်သည်။ စမတ်ဖုန်းတစ်လုံးကိုလည်းကစားသမားအဖြစ်အသုံးပြုနိုင်မည်ဟုစိတ်ပိုင်းဖြတ်ထားပါကကောင်းမည်မဟုတ်လော။ အိမ်အပြင်၌ပင်အသံထွက်ရန်လုံလောက်သောအသံစွမ်းအင်ကိုပို့ဆောင်ပေးနိုင်သည့်ဖုန်း။ ဒါကသူ့ဟာသူစျေးကွက်အတွက်အသစ်အဆန်းဖြစ်လာနိုင်တယ်။ ကြိုဆိုပါတယ်။
သတိပြုသင့်ပါတယ် အသံအပိုင်း၌ အဆိုပါဒဏ္myာရီ mini ကိုဆိပ်ကမ်းမရှိခြင်း။ ကျွန်ုပ်တို့၏နားကြပ်များကိုမိုဘိုင်းဖုန်းများအစကတည်းကနီးကပ်စွာဆက်သွယ်ခဲ့သည်။ Apple သည်၎င်း၏ iPhone7နှင့်အတူ၎င်းကိုဖယ်ရှားပစ်ရန်ဆုံးဖြတ်သောအခါ၎င်းသည်အခြားသူများကိုမလိုက်မီအချိန်ကောင်းဖြစ်ခဲ့သည်။ vkworld S8 မှာဒီဝင်ပေါက်မရှိဘူး၊ တစ်ခါတစ်လေမှာလွဲချော်နေတာငါပြောရမယ်။
ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ယနေ့တွင်လုံးဝအသုံးဝင်ဆဲဖြစ်သောဆိပ်ကမ်းကိုဖယ်ရှားရန်ဆင့်ကဲပြောင်းလဲမှုတစ်ခုကိုမစဉ်းစားနိုင်ပါ။ ထုတ်လုပ်သူများအနေဖြင့်မည်သည့်နားကြပ်ကိုမဆို USB type C connector နှင့်ချိတ်ဆက်နိုင်စေရန် box တွင် adapter ပါဝင်သည် ငါတို့မလုပ်နိုင်သည့်အရာတစ်ခုဖြစ်သည် eလက်ကိုင်အားသွင်းချိန်တွင်သီချင်းနားထောင်ပါ။ ထိုကံမကောင်းမကြာခဏပြုမိကြောင်းအရာတစ်ခုခုသည်။
ဤအချက်မှာထုတ်လုပ်သူများအနေဖြင့်အရင်းအမြစ်များပိုမိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံသောရှုထောင့်တစ်မျိုးကိုတွေ့ရှိရသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်လက်ဗွေဖတ်သူများနှင့်ရင်းနှီးပြီးဖြစ်သည်။ ကုမ္ပဏီတစ်ခုစီကသူတို့ရဲ့ပုံသဏ္orာန် (သို့) တည်နေရာကိုပြောင်းလဲခြင်းအားဖြင့်သူတို့ကိုယ်တိုင်ဘယ်လိုလုပ်ခဲ့ကြသလဲ။ ဖုန်းမော်ဒယ်သစ်အားလုံးနီးပါးတွင်လက်ဗွေဖတ်စက်ရှိသည်.
ဒီလက်ဗွေဖတ်စက်တွေမပေါ်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ဘာတွေဖြစ်ခဲ့လဲဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်ခဲ့ရတယ်။ Android Operating System စတင်ကတည်းကလက်တွေ့တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖုန်းများသည်သော့ဖွင့်ပုံစံကိုတည်ဆောက်ရန်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသည်။ စမတ်ဖုန်း၏ပင်မမီနူးကိုအသုံးပြုရန်ပုံစံနှင့်အတူကိန်းဂဏန်းကုဒ်ပါရှိသည်။
ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က အင်အားအကြီးဆုံးကုမ္ပဏီများမည်သို့ပါဝင်သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့မြင်တွေ့ခဲ့ရသည် သင်၏“ ထိပ်တန်း” ကိရိယာများအတွက်လုံခြုံရေးစနစ်သစ်။ နည်းပညာတစ်ခု အတော်လေးဝတ္ထု ဒါကငါတို့ဖုန်းကိုငါတို့မျက်နှာနဲ့ပဲဖွင့်ဖို့ခွင့်ပြုတယ်။ အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်တော့လူအများကဒီနည်းပညာကိုကူးယူရန်ထွက်လာခဲ့ကြသည်။
မျက်နှာ detector: တိုးတက်မှုလိုအပ်ပါတယ်
ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်ဖုန်းအသစ်ကိုဖွင့်သောအခါ၎င်းသည်၎င်း၏ကန ဦး ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံအတွက်မေးခွန်းများနှင့်ချိန်ညှိမှုများပြုလုပ်ပြီးဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့်ငါတို့အထူးသဖြင့်စိတ်လှုပ်ရှားမိတယ်၊ vkworld S8 သည်ဖုန်းကိုသော့ဖွင့်ရန်အတွက်အသိအမှတ်ပြုခံရသည့်မျက်နှာကိုတောင်းဆိုသည်။
ငါတို့ပြောရမယ် နိယာမမှာတော့အာရုံဟာအလွန်ကောင်းပါတယ်။ သင်၏မျက်နှာကိုကိရိယာနှင့်ပိုမိုနီးကပ်စေခြင်း အတော်လေးလျင်မြန်စွာသော့ဖွင့်။ ရှေ့ကင်မရာတည်နေရာ၏အဆင်မပြေမှုကိုကျော်လွှား။ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းကြည့်။ ဖုန်းကသော့ဖွင့်သည်။ ကြိုတင်ငွေဖြည့်ခြင်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်အသုံးပြုသောအခါကျွန်ုပ်တို့၌များသောအားဖြင့်ဖြစ်သည်.
ဒါပေမယ့်စမ်းသပ်မှုတွေပြီးသွားတဲ့အခါဒီနည်းပညာကိုကျွန်တော်တို့အကြီးအကျယ်စိတ်ပျက်သွားတယ်။ ဒီဖုန်းကိုသော့ဖွင့်ရန်မျက်နှာဖုံးအသိအမှတ်ပြုမှု။ ငါတို့ပြောခဲ့သလိုပဲအလုပ်လည်းမြန်တယ်။ အဆိုပါပြproblemနာကစတင်ထွင်းဘက်ခြမ်းနှင့်အတူသော့ဖွင့်မသာသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ လူ ၁၀ ဦး ကိုစမ်းသပ်မှုမှာသူတို့ထဲက ၃ ယောက်ကဖုန်းကိုသူတို့မျက်နှာနဲ့သော့ဖွင့်နိုင်ခဲ့တယ်။ ထိုအရာကိုသော့ဖွင့ ်၍ မရသောသူတယောက်မျှမရှိ။
ပထမ ဦး ဆုံးအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်မျက်နှာဖုံးမှတ်မိခြင်းအတွက်ကိရိယာမှယူထားသောဓာတ်ပုံသည်ကောင်းမွန်သောအလင်းရောင်အခြေအနေတွင်မရိုက်ထားပါဟုကျွန်ုပ်တို့ထင်ခဲ့သည်။ သို့သော်ဓာတ်ပုံကိုအကောင်းဆုံးစံပြအခြေအနေတွင်ထပ်ခါတလဲလဲပြုလုပ်ပြီးနောက်မျက်နှာအသိအမှတ်ပြုမှုသည်ဆက်လက်တည်ရှိနေသည် အလွန်တိ။ ထို့ကြောင့်အရာအတွက်ရှုထောင့် ပြုပြင်စရာများစွာရှိပါသည်။ ဘယ်စပ်စုသည်ကြီးနှင့်ဖြစ်နိုင်ပေမယ့်ယခုအချိန်တွင်ကြောင့်တစ်ခုခုပါပဲ အရမ်း improvable.
vkworld S8 တွင်အကောင်းဆုံးနှင့်အကောင်းဆုံး
ပထမ ဦး ဆုံးနှင့်အရှိဆုံးဒီကဗျာအရာဖြစ်၏ သင့်မျက်နှာပြင်အရွယ်အစား။aကပြီးစီးဖြစ်ကြောင်းအချို့သောတိုင်းတာ ကောင်းသော resolution။ ၎င်း၏မျက်နှာပြင်သည် wkworld S8 ကိုမာလ်တီမီဒီယာအကြောင်းအရာများကစားရန်အတွက်အကောင်းဆုံးစမတ်ဖုန်းဖြစ်စေသည်။
တစ် ဦး ကကမ်းလှမ်းကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့် 5500 mAh ဘက်ထရီ ၅.၉၉ လက်မမျက်နှာပြင်သည်စားသုံးနိုင်စွမ်းနှင့်ကိုက်ညီသည်။ ပျှမ်းမျှဖုန်းကို အသုံးပြု၍ ဘက်ထရီသည်ကျွန်ုပ်တို့အားနှစ်ရက်ကြာသည့်အထိကြာရှည်စွာကမ်းလှမ်းနိုင်သည်။
တိုးတက်စေရန်အရာများကဏ္sectionတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကဏ္ aspects များစွာပါဝင်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ vkworld S8 သည်တန်ဖိုးရှိသည့်စမတ်ဖုန်းတစ်ခုမဟုတ်ဟုမဆိုလိုပါ။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့်၎င်းသည်အလွန်အမင်းအကြံပြုထားသည့်ဖုန်းတစ်လုံးဖြစ်ပြီး၎င်းသည်မည်သည့်ဈေးနှုန်းနှင့်မည်မျှရွေ့လျားနေကြောင်းကိုသိထားသည်။
ကျနော်တို့တိုးတက်စေရန်အဓိကရှုထောင့်တစ် ဦး အဖြစ်ထောက်ပြချင်တယ် ရှေ့ကင်မရာတည်နေရာ။ ပထမလူကအနည်းဆုံးလက်ျာလက်ဖြစ်ခြင်း၊ လက်ချောင်းတစ်ချောင်းသို့မဟုတ်လက်တစ်ပိုင်းကိုပြခြင်းမရှိဘဲဓာတ်ပုံရိုက်ရန်မည်မျှခက်ခဲကြောင်းပထမလူကကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်နိုင်ခဲ့သည်။ ပိုမိုကောင်းမွန်သောနေရာ၌ထားခြင်းမရှိသောကြောင့်အရည်အသွေးမြင့်သောအာရုံခံကိရိယာကိုကျွန်ုပ်တို့ရင်ဆိုင်ရသည်ကိုစဉ်းစားခြင်းကရှက်စရာဖြစ်သည်။
အလေးချိန် လူများစွာအတွက်အတားအဆီးဖြစ်နေဆဲပဲ။ ထို့အပြင်စားသုံးသူအများစုသည်သယ်ဆောင်ရလွယ်သောအလေးချိန်အတွက်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ကိုနာရီပေါင်းများစွာစွန့်လွှတ်လိုကြသည်။
ကျနော်တို့ထပ်မံကြောင်းကိုယျ့ကိုယျကိုပြန်လုပ်ပါ လက်ဗွေဖတ်စက်၏တည်နေရာကိုတိုးတက်စေနိုင်သည်။ ၎င်းသည်ကင်မရာမှန်ဘီလူးနှင့်နီးကပ်စွာရှိနေခြင်းကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏လက်ချောင်းများသည်၎င်းကိုအကြိမ်များစွာညစ်ညမ်းစေနိုင်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » vkworld S8 ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ပါ
သာမာန်အသုံးပြုသူတစ် ဦး အတွက်အသုံး ၀ င်သောကောင်းမွန်သောမိုဘိုင်းကောင်းတစ်ခုဖြစ်သော်လည်းမျက်နှာပြင်သည်အလွန်ကြီးပြီးလောဘကြီးသည်။ ဘလူးတုသ်သည်ဘေးအန္တရာယ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်စကားလက်ဆုံပြောဆိုမှုအလယ်တွင်ပြတ်တောက်သွားပြီးသင်၌တွဲဆက်ထားသောကိရိယာများစွာရှိသည်၊
ကိုယ်ပိုင် charger ကအရမ်းကောင်းတယ်။ ဒါပေမယ့်သင်အားသွင်းမယ်ဆိုရင်၊ cable ကခုန်ပြီးထွက်လာပြီးအရမ်းနှေးသွားတယ်။